समाचार सही कि गलत पाठक आफैँले छानेर बुझ्नुपर्ने ! « प्रशासन
समाचार सही कि गलत पाठक आफैँले छानेर बुझ्नुपर्ने !
काठमाडौँ । ‘हैन कस्तो जमाना आएको ? समाचार सही कि गलत पाठक आफैँले छानेर बुझ्नुपर्ने ? ए स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र पत्रकार भनेर कुर्लनेहरू हो, स्वतन्त्रता भनेको तिमीहरूलाई जे मन लाग्यो त्यही हो ।’
‘सञ्चारमाध्यमले समग्र प्रवृत्ति दिने हो, श्रोता र पाठकले आफ्नो हिसाबले बुझ्न सक्छन्, यहाँ त कसरी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना दिने भन्ने व्यवस्थित प्रणालीको पनि अभाव छ ।’
सामाजिक सञ्जालले पनि सञ्चारमाध्यमलाई पछ्याइरहेका छन् भने कतिपय सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सञ्जालका सूचनालाई पनि उपयोग गरेका छन् तर एक लाखभन्दा बढी मत भएको कुनै नगरपालिकामा ४०/५० मत गन्दादेखि नै ‘फलानोको अग्रता, फलानो पछि प¥यो’ जस्ता शीर्षक र सन्देशका प्रशस्त समाचार आइरहेका छन् । कतिपयले पुष्टि बिनाको आँकडाका आधारमा पनि समाचार बनाएका छन् ।
एउटा उम्मेदवारको १६ मत र अर्कोको ३२ आयो भने दोब्बरको अन्तर भनिदिएमा के होला ? खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले भन्नुहुन्छ, “अपरिपक्व सूचना पस्केर भ्रम सिर्जना गर्नु हुँदैन । गलत अर्थ लाग्ने गरी या जानेर/नजानेर वा बद्नियतपूर्वक सम्प्रेषण गरिनु गल्ती हो । सञ्चारमाध्यम ‘प्रोपोगान्डा’ गर्नेको पछि लाग्नु हुँदैन । सञ्चारमाध्यम र पत्रकार सचेत हुनुपर्छ ।” नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उनको विचारमा निर्वाचन परिणामसम्बन्धी समाचार ‘असरल्ल र तोडमोडपूर्ण’ भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका प्रमुख चिरञ्जीवी खनाल निर्वाचन आयोगको गणना प्रक्रियामा देखिएको धिमा गतिका कारण सूचना सम्प्रेषणमा यस्तो स्थिति देखिएको बताउँछन् । खनाल भन्छन् –“आयोगले सार्वजनिक गरिसकेका सूचना सञ्चार माध्यमले आफ्ना पाठक र दर्शकलाई दिनु उसको दायित्व हो । मूल कुरा आयोगले छिटो गणना र सहज व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।”
वरिष्ठ पत्रकार एवम् अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक युवराज घिमिरे सञ्चारमाध्यमले गल्ती गरेको छ भन्नुभन्दा पनि आयोगको सूचना प्रणाली कस्तो छ भन्ने प्रश्नलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । यस्तो सवालमा कुनै निश्चित मानक वा मापदण्डले काम गर्नुपर्छ भन्ने नहुने घिमिरेको तर्क छ ।
Tags : मतपरिणाम सञ्चारमाध्यम सूचना स्थानीय निर्वाचन